Ividiyo> = Imifanekiso + namabali | Martech Zone
Abantu abafundanga. Ayisiyonto imbi leyo ukuyithetha? Njengebhlog, iyaphazamisa ngakumbi kodwa kuya kufuneka ndivume ukuba abantu abafundanga ngokulula. Iimeyile, iiwebhusayithi, iibhlog, amaphepha emhlophe, ukukhutshwa koonondaba, iimfuno zomsebenzi, izivumelwano zokwamkelwa, imiqathango yenkonzo, iindlela zokuyila…. akukho mntu uzifundayo.
Sixakekile- sifuna ukufikelela kwimpendulo kwaye asifuni kuchitha xesha. Ngokwenyani asinalo ixesha.
Le veki ibiyiveki yeembaleki kum ekubhaleni ezinye izinto zokuthengisa, ukuphendula ii-imeyile, ukubhala amaxwebhu emfuno zabaphuhlisi, kunye nokumisela okulindelweyo nethemba kwinto esinokuyihambisa… kodwa uninzi lwayo khange lusetyenziswe ngokuchanekileyo. Ndiqala ukuqaphela ukuba ingaba imifanekiso kunye namabali aneempembelelo kangakanani kumjikelo wentengiso, umjikelo wophuhliso kunye nomjikelo wokuphunyezwa.
Kuyacaca ukuba iidayagramu ziyimfuneko ukwenza uphawu lomzimba kwimemori yabantu. Mhlawumbi sesinye sezizathu zokuba kutheni Ubugcisa obuqhelekileyo yimpumelelo enkulu ngabo iividiyo.
Kule nyanga iphelileyo, sichithe imini nobusuku kwi RFP Apho siphendule imibuzo emininzi malunga nemveliso yethu kunye namandla ayo. Sagalela ngaphezulu kwamagama, sakha imizobo emikhulu kwaye saba neentlanganiso ezininzi nenkampani, bobabini buqu nangefowuni. Sasasaza iCD esebenzisana nayo eyayishwankathela ishishini kunye neenkonzo zethu.
Ekupheleni kwenkqubo, sizifumana # 2 ekusebenzeni.
Kukho konke ukunyaniseka, zonke iincoko zelizwi, izinto zokuthengisa kunye namaxwebhu esichithe iiyure kuwo khange acacise umfanekiso ocacileyo kumthengi sinento ebalulekileyo ababeyifunayo. Senzile… kodwa kuzo zonke iimfumba zamaxwebhu, iintlanganiso, imiyalezo, njl., Loo myalezo ulahlekile.
Ayisiyonto iphazamisayo ukuba inkampani ekwisikhundla se- # 1 inethuba lokubonisa ngokupheleleyo (kwilebhu yangaphakathi) nomthengi onokuhanjiswa. Saziswa kwinkqubo kamva kakhulu kwaye asityhalelanga umboniso ongaphakathi endlwini. Sasiqinisekile ukuba sinxibelelane ngokupheleleyo ne izisombululo abazifunayo.
Impendulo evela kumthengi kukuba umboniso wethu wawubuchwephesha kakhulu kwaye usilela inyama ngento efunwa ngumthengi. Andivumelani - sijolise kwinkcazo-ntetho yethu yonke kwiinkalo zobuchwephesha zenkqubo yethu ngenxa yokuba inkampani iye yasilela kabuhlungu kumthengisi wabo wangaphambili. Sasisazi ukuba isicelo sethu simi sodwa, ke sifuna ukubuyela ekhaya malunga nendlela itekhnoloji yethu eyahlukileyo ngayo.
Xa ndijonga ngasemva kuyo, ndicinga ukuba ngekhe saphosa itoni yeefowuni, amaxwebhu kunye nemizobo kwaye sibeka nje ividiyo malunga nendlela isicelo esisebenze ngayo kwaye sagqitha kulindelo lwabo. Ndiyazi ukuba ndibhala okuninzi malunga nevidiyo mva nje kwibhlog yam - kodwa ndisiba likholwa ngokuphakathi.
tags: uhlala kwividiyoIiVidiyo zeNtengisoividiyo yangempelaukuthengisayoutube
Yongeza Y! Phila kwibar yakho esecaleni!
Imithombo yeendaba kwiNtlalo
Feb 9, 2008 ngo-7: 24 PM
Ndithethile noMark ngale nto namhlanje kwiBhola yeBhasikithi, kwaye into yokuqala endambuza yona "ingaba uzobe imifanekiso nomthengi?" Kumava am, akukho nto izisa iingxoxo zeshishini nezobuchwephesha kunye ngaphandle kwengxoxo "yebhodi emhlophe" apho ufumana lonke unxibelelwano, iinkqubo, izizathu, abasebenzisi, njl. Ebhodini kwingxoxo ephilayo nomthengi. Ndivumelana nawe ukuba akukho mntu ufunda nantoni na. Ukuba ndibhala into, ndiyathanda ukufunda kunye negama lomthengi ngegama, ke loo nto ifuna ukuba amaxwebhu abe mafutshane.
Uxolo ngenkcazo ende, kodwa ucofe iqhosha elishushu kunye nam, kwaye ndiye ndangena kwincoko namhlanje…
Feb 10, 2008 ngo-3: 04 PM
Incoko yakho noMark ikhuthaze ngokuqinisekileyo le posti yebhlog kwaye ndiyavumelana nawe. Ngenxa yobuninzi bezinto esasizifuna ukutyhalela kweli themba lethuba elifutshane, ndicinga ukuba ukuya ngaphaya kwemifanekiso bekuya kuba yimfuneko- mhlawumbi umxube wemifanekiso, imiboniso erekhodiweyo kunye nemiboniso ebukhoma.
Ngokuqinisekileyo sasibekwe emngciphekweni kwasekuqaleni - enye inkampani sele ifakwe ngaphakathi ngaphandle kolwazi lwethu - kodwa inyani yokuba sinemveliso engcono ibinokuhlala ngaphandle ngakumbi ukuba besishiye bonke abathathi-nxaxheba benenkumbulo ecacileyo yeemveliso zethu. 'ubuchule obungcono.
Feb 10, 2008 ngo-12: 22 AM
Uxolo kukuva ukuba awuyenzanga intengiso. Ukunyaniseka kwakho kuthakazelelwa kakhulu. Kumava athobekileyo ukuba kwindawo yesi-2 kwinto ebalulekileyo. Kuvakala ngathi ubethelele isikhonkwane entlokweni kunye nokuqonda kwakho kwividiyo. Ukuba ucinga ngentetho yokuthengisa njengamava emfundo kumthengi, uyakhumbula ukuba abantu bafunda ngeendlela ezahlukeneyo. Ootitshala bayazi ukuba abanye abantu baqhuba ngokufunda ngokumamela, abanye abantu bafunda ngokufunda, abanye abantu bafunda ngokwenza. Ukuba unako ukubonelela ngamava ahlukeneyo okufunda, uya kufikelela kwiinjongo zakho zokufundisa. Unako ukuhlala unemiboniso emininzi ngeendlela ezahlukeneyo ezilungiselelwe kwangaphambili, kwaye ulinganise abaphulaphuli bakho ngexesha lokubonisa. Ukuba bakunika imikhondo emincinci efana nokuthi "Ndiyakuva, Doug", okanye "Andiboni ukuba uza phi apha", unokufumana ukuqonda okuncinci kwisitayile sabo sokufunda… .. emva koko uye kwelacala . Ngethamsanqa ngentetho elandelayo. Kwaye enkosi ngevidiyo encinci epholileyo kwiiBlogs kwindawo ye-Commoncraft! Yayintsha kakhulu loo nto! Kwaye ndiyabulela ngenxa ye-backlinks evela kumagqabantshintshi angaphambili… ndibeka ibhlog yakho kuluhlu lwam lweeblogi ezingenanto emva kwendawo yam!
Feb 10, 2008 ngo-3: 06 PM
Enkosi uPenny! Amagqabantshintshi akho abetha kwinto ebaluleke kakhulu-ukuba injongo yethu yayikukuba fundisa umxhasi. Ukuba ibiligumbi lokufundela elo, abafundi bethu ngebebengxamile. Kufuneka sibe ngabafundisi abangcono!
Feb 10, 2008 ngo-4: 29 AM
Iposi enkulu, uDoug. Impendulo yam inde kakhulu, kangangokuba ndenza isithuba, endaweni yokuphawula:
Ividiyo enamandla = ibali elikhulu + ukwenziwa okukhulu
Feb 10, 2008 ngo-3: 09 PM
Iposti enkulu, Martin! Ndingabakhuthaza bonke abantu abafunda le posi ukuba baye entlokweni yakho.
Feb 11, 2008 ngo-8: 46 AM
Mibini imigaqo esisiseko ekufuneka ilandelwe yiyo nayiphi na intengiso:
Umthetho # 1 (ukusuka kubuntatheli) -Umntu ophakathi kwinqanaba lokufunda kunye nenqanaba lokuqwalaselwa kwebanga lesi-6. Sebenzisa izivakalisi ezifutshane kunye namagama amancinci. Ulwazi olubalulekileyo luya kuqala, okungabalulekanga kuya ekugqibeleni.
Umthetho # 2 (osuka kwintengiso) -Sibhuqwa ngaphezulu kwemiyalezo echukumisayo engama-30,000 ngosuku (oku kungaphezulu kwentengiso). Ukunqumla i-clutter, nakubantu abakrelekrele, kufuneka ulandele umgaqo # 1.
I-RFP elungileyo ngamaphepha nje ambalwa kwaye iya kujongana kuphela nesidingo esithile somthengi, angathethi ngenkampani ephendulayo, inkqubo yabo, okanye kubandakanya izinto ezininzi kunye nezinto ezininzi. Ukuba kunjalo, zibandakanye kwisalathiso, kodwa zibandakanye kuphela izinto ekufuneka uzenzile.